Deni oo safar qarsoodi ah ku tagey Imaaraadka | KEYDMEDIA ONLINE
25 January 2021 La kulan wasiirkii su’aasha ka cararay !
25 January 2021 Dibad-bax Farmaajo ka dhan ah oo Muqdisho ka dhacay
25 January 2021 Wasiir Dubbe, “Boqol maxbuus ayaan ku qabanay dagaalka”
25 January 2021 Al-Shabab oo la wareegaty Ceeldheere
25 January 2021 Carruur wada dhalaty oo ku dhintay dagaalka Baled-Xaawo
25 January 2021 Dowladda oo sheegtay in ay ka hor tagtay hub la soo galinayay dalka
25 January 2021 Dowladda Soomaaliya oo dagaalka Gedo ku eedeysay Kenya
25 January 2021 Dagaal Culus oo ka dhacay Balad-Xaawo
25 January 2021 Xildhibaanno loo diiday iney shiraan
24 January 2021 Maareeyihii dekadda Kismaayo oo la dilay
24 January 2021 “Ma jirto doorasho dhinac ka raran, mana jiri doonto mid bar-bar socota”
24 January 2021 Al-Shabaab oo weerar kale ku qaaday Bacaadweyn
24 January 2021 Tirada Xisbiyada la diiwaan-geliyay oo la shaaciyay
24 January 2021 Itoobiya oo Qunsul cusub u dirsatay Puntland
24 January 2021 Swan iyo Qoor-Qoor oo Wadahadal ku yeeshay Dhuusamareeb
24 January 2021 Dilal ka dhacay Muqdisho iyo amniga oo la adkeeyay
24 January 2021 Saldhigyadda Ciidanka Jabuuti ee Hiiraan oo la weeraray
24 January 2021 Halkee la geeyay Ciidanka Mareykanka ee ka baxay Soomaaliya?
24 January 2021 Howlgal ka dhacay Waqooyiga Gaalkacyo
24 January 2021 Shir DF iyo Beesha Caalamka Muqdisho uga furmaya
Deni oo safar qarsoodi ah ku tagey Imaaraadka
Shirkadda DP World ayaa mudo 30 sano ah loo saxiixay inay maamusho dekadda Boosaaso, oo ah isha dhaqaalaha ugu wayn ee maamulka Puntland.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni, ayaa ku sugan dalka Imaaraadka, halkaasoo uu ku tagey safar qarsoodi ah oo aan horey loo sii shaacin.
Magaaladda Abu Dhabi ayuu Deni kula leeyahay Wadahadallo albaabada u xiran, oo Madaxda dawladda Imaaraadka la leeyahay, iyadoo arrimaha uu Madaxweynaha Puntland u tagey dalkaasi ay kamid yihiin heshiiska DP World ee dekadda Boosaaso iyo doorashooyinka Soomaaliya.
Deni ayaa maalmihii dambe ku sugnaa magaaladda Nairobi, oo sida ay maalmo kahor Keydmedia Online soo qortay uu kulamo kula qaatey Saraakiil katirsan Sirdoonka Imaaraadka kahor inta uusan u ambabixin Abu Dhabi.
Imaaraadka ayaa dedaal ugu jira inuu soo ceshto saameyntii uu ku lahaa siyaasadda Soomaaliya, oo kala wareegtay Qatar markii la doortay Farmaajo, oo dhaqaalihii uu ku galay doorashadda ay ka bixisay, iyadoo u marisay Fahad Yaasiin.
Puntland ayaa 2016 heshiis 30 sano ah la gashay DP World oo lagu wareejiyay dekadda Boosaaso, oo lagula heshiiyay inay ballaarin iyo casriyeyn ku sameyso, iyadoo saami badan laga siiyay dakhliga soo xaroodda.
0 Comments Topics: boosaaso imaaraadka puntland qatar
Itoobiya oo Qunsul cusub u dirsatay Puntland
Warar 24 January 2021 16:09
Dowladda Federaalka Itoobiya ayaa qunsul cusub oo lagu wado in uu ka howl galo Puntland usoo magacaabatay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland.
Howlgal ka dhacay Waqooyiga Gaalkacyo
Warar 24 January 2021 9:20
Puntland: Booliska oo Weriye ku xiray goob qarsoodi ah
Warar 11 January 2021 14:27
Dagaal Khasaaro geystay oo ka dhacay Puntland
Warar 10 January 2021 8:31
NISA oo baaraysa Lacag Mucaaradka Garoonka uga soo degtay
Warar 20 January 2021 18:00
Ciidamada ayaa ku jira xiligan qeybta Cargo - Xamuulka diyaaradaha ee Garoonka Aadan Cadde kadib markii ay heleen xogta ku saabsan in Mucaaradka Lacag u timid.
Labo kamid ah qodobada ugu waaweyn fashilka Farmaajo
Diyaarad Qatar ka timid oo xili habeen ah Muqdisho kasoo degtay
Ahmiyadda Doorashada dadban ee 2021 oo hoos loo dhigay
Kalsooni la’aanta Shacabka ku qabaan Garsoorka dalka